Lahatsary Fanomezam-boninahitra, Mampifanaraka Ny Fanononana imolotr’ireo Iraniana Ny Fitiavan-dry Zareo ilay Kalazan’ny Mozika, Mohammed-Reza Shajarian. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2016 2:35 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsary iray manome voninahitra ny mozikan'i Shahjarian. Hoy ny vakin'ny soratra “Maestro, Tiako/Tianay ianao”
Ho an'ny maro ao anatiny sy ivelan'ny firenena, i Mohammad-Reza Shajarian no tena feon'i Iràna. Lalaovina any anaty trano fisakafoanana, fisotroana dite, ary tehezan-tendrombohitra fikorisàna amin'ny ski ny mozika ataony amin'ny fomba nentimpaharazana Persiana. Mameno trano amin'izany ireo Iraniana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, na inona na inona fironana politikany.
Niady tamin'ny aretina homamiadana ity lehilahy endrika hitamaso ity tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary lasa raharaha manahirana ny sain'ireo mpitia mozika any rehetra any ny fahasalamany. Ho fanomezana voninahitra an'i Shajarian sy ny mozikany, tsy ela akory izay dia namoaka lahatsary iray ahitàna olona manaraka imolotra ny iray amin'ireo hirany ny tranonkalam-barotra Avideh, sady mizara hafatra feno fitiavana, isan'izany ny tenifototra #Maestro_We_Love_You.
Tao anaty bitsika iray fampahafantarana ilay lahatsary, nantsoin'ny Avideh hoe “feon'ny vahoaka Iraniàna” i Shajarian :
Shajarian, feon'ny vahoakan'i Iràna: #Maestro_we_love_you #Shajarian
Shervin Nekuee, mpampiasa Facebook, nizara ilay lahatsary sady nanoratra ny hafatra manokana avy aminy ho an'ilay ustad (maestro):
Mirary soa ho an'ny maestro – vahoaka Iraniàna mihira hafatra iray firariana ny tsara rehetra ho an'ilay maestro velona ho an'ny Hira Klasika Persiàna, Ustad Shajarin [sic] – izay miady amin'ny homamiadana amin'izao fotoana izao.
چه زیباست این همدلی – [Fihetsehampo mahafinaritra loatra]
Tamin'iny Martsa lasa iny, namoaka lahatsary iray i Shajarian ho fanamarihana ny Fankalazàna ny Norouz ( Taombaovao) ao Iràna. Tao anatin'izany, noresahany ny homamiadana manjo azy, ny firariany sy soa sy ny tsara ho an'ny vahoaka ary ny fampitàny fanantenana momba ny hoavy.
Tsy hoe mpifehy fotsiny ny mozika persiana nentindrazana i Shajarian, fa koa mpahay ny tantaran'ny mozika izay namelona indray ny fitiavan'ny vahoaka ny endrika nentindrazana ananan'ny mozika ao Iràna. Ny asany nitahiry sy nizara izay mozika izay no ampahany betsaka amin'ny antony mampalaza azy eny anivon'ny andian-taranaka tanora ankehitriny. Noho ny gadon'ny mozikany sy ny asany hanavotra ny lova ara-kolontsain'i Iràna, indroa izy no natolotra hahazo ny loka fanomen'ny UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Tamin'ny 1999 izy, natolotra hahazo ny Picasso Award ary tamin'ny 2006, ny Mozart Medal.
Raha vaovao amin'ny mozikany ianao, maro amin'ireo hirany no azo jerena ao amin'ny Youtube ho fahafinaretan'ny sofinao. Ity ny iray ho fanombohanao :